စီးပွားဖြစ်အိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေ | ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအိမ်ခြံမြေရန်ပုံငွေအဖွဲ့ - REICG
အမေရိကန်မဟုတ်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုလက်ခံခြင်းမေ ၁ ရက်
ကျွန်ုပ်တို့၏ REI ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အတွေးအခေါ်သည် Warren Buffet မော်ဒယ်ကို အတုယူကာ၊
ကျနော်တို့စီးပွားဖြစ်အိမ်ခြံမြေဝယ်ခြင်းနှင့်အစဉ်အမြဲ ... ကိုင်! ငှားရမ်းခအားလုံးသည်ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာပစ္စည်းများပိုမို ၀ ယ်ရန်ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည်ဖြစ်ပြီးတန်ဖိုးကိုတိုးပွားစေသည် အိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေ အဆ။
ကျနော်တို့စီးပွားဖြစ်အိမ်ခြံမြေဝယ်ခြင်းနှင့်အစဉ်အမြဲ ... ကိုင်! ငှားရမ်းခအားလုံးသည်ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းများပိုမို ၀ ယ်ရန်ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည်ဖြစ်ပြီးရန်ပုံငွေ၏တန်ဖိုးကိုအဆတိုးများပြားစေသည်။
အများစုမှာအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေများကိုဖြန့်ဝေခြင်း / ခွဲဝေခြင်းများမှဖြစ်စေ၊ နောက်ခံရှိပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဖျက်သိမ်းခြင်းဖြစ်စေဖြစ်စေနည်းလမ်းနှစ်ခုအနက်မှအမြတ်အစွန်းများကိုဖြန့်ဝေသည်။
REICG သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်ခြံမြေဝယ်ယူမှုများမှရရှိသောငွေစီး ၀ င်မှုများကိုအိမ်ခြံမြေများပိုမိုဝယ်ယူရန်ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည်။ ဤရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းစနစ်သည်ရန်ပုံငွေ၏စုစုပေါင်းငွေသားစီးဆင်းမှုကိုတိုးပွားစေသည်။ ရန်ပုံငွေကိုပိုင်ဆိုင်မှုများထပ်မံဝယ်ယူရန်ခွင့်ပြုထားသည်။ REICG သည်ကာလရှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်ပြီးရန်ပုံငွေ၏တန်ဖိုးကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းအားဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ငွေကိုတိုးပွားစေသည်။
အိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအများစုသည်ကာလရှည်သဘောသဘာဝရှိသည်။ ရေရှည်တွင်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရှိသော်လည်း REICG သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို၎င်းတို့၏အချိန်ဇယားအတိုင်းရှယ်ယာများအားဖျက်သိမ်းခွင့်ပြုနိုင်သည့်ငွေထုတ်ချေးနည်းကိုတီထွင်ခဲ့သည်။
ထိပ်ဆုံး ၁% သည်သူတို့၏ကြွယ်ဝမှုကိုစီးပွားဖြစ်အိမ်ရာများဖြင့်မျိုးဆက်သစ်များအထိတိုးပွားလာခဲ့သည် သူတို့သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဆင့်ကို ၀ ယ်ယူရန်အထူးသီးသန့်ရရှိထားကြသည်။ စီးပွားဖြစ်အိမ်ခြံမြေနှင့်ဤပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရေရှည်ထိန်းသိမ်းထားပါ။
ဘာကြောင့် A မှာ မြှုပ်နှံထားတာလဲ။ REI Capital Growth ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေ?
သင်၏ငွေကိုမင်းအတွက်အလုပ်လုပ်ပေးတာဟာငွေကြေးလွတ်လပ်မှုအတွက်သက်သေလမ်းကြောင်းတစ်ခုပါ။ ပြီးတော့မင်းရဲ့ငွေကိုအိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းမှာ ၀ င်ရောက်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးတာကထူးခြားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေရှိတယ်။
အိမ်ခြံမြေများတွင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းသည်အထူးသဖြင့်ကျွမ်းကျင်သူများကအရာအားလုံးကိုစီမံနိုင်သောအိမ်ခြံမြေရန်ပုံငွေတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည့်အခါအခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမျိုးအစားများစွာထက်ပိုမိုတည်ငြိမ်သည်။ သို့သော်လည်းလူအများစုသည်သင်ကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်ခြင်းသို့မဟုတ် ၀ ယ်ခြင်းဖြင့်အိမ်ခြံမြေထဲသို့ ၀ င်နိုင်သည်ဟုလူအများကယူဆသည်။
A အိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေ ၎င်းသည်အိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဈေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေသည်အိမ်ခြံမြေ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ရည်ရွယ်ထားသောတစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်ကော်ပိုရေးရှင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှရန်ပုံငွေစုဆောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ တရား ၀ င်သဘောအရအိမ်ခြံမြေရန်ပုံငွေသည်စိတ်တူကိုယ်တူရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုစုစည်းရန်ဖန်တီးထားသောကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အချိန်အများစု၊ အမေရိကန်စီးပွားရေးအိမ်ခြံမြေရန်ပုံငွေ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတွေကအရင်းအနှီးတန်ဖိုးထားမှုကြောင့်အမြတ်အစွန်းရကြတယ်။
#1- အစုစု ကွဲပြားခြင်း
စျေးကွက်များပြောင်းလဲသောအခါ အချို့သောအိမ်ခြံမြေ အမျိုးအစားများသည် အခြားအိမ်ခြံမြေများထက် စွန့်စားရနိုင်သည်။ ဤစီမံခန့်ခွဲမှု၏ထိပ်တွင်၊ တစ်ခုတည်းသာမက အိမ်ခြံမြေအများအပြားတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည် ကောင်းကျိုးများမှလွဲ၍ မဖြစ်နိုင်သလောက်ဖြစ်နိုင်သည်။ အဲဒါ ဘယ်မှာလဲ။ REI Capital Growth စီးပွားဖြစ်အိမ်ခြံမြေရန်ပုံငွေကို လည်ပတ်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့် ကြီးထွားလာမှုတွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ အတွေ့အကြုံဖြင့် လာပါသည်။
မင်းအိမ်တွေ ၀ ယ်ဖို့ပိုက်ဆံအများကြီးမကုန်မချင်းအလုပ်လုပ်မယ့်အစား၊ ငါတို့ရဲ့အမေရိကန်စီးပွားရေးအိမ်ခြံမြေရန်ပုံငွေကမင်းကိုအရင်းအနှီးနည်းပြီးအလုပ်ပိုနည်းအောင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့အခွင့်အလမ်းပေးပါလိမ့်မယ်။
#3: Passive ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဟာဗျူဟာ
အိမ်ခြံမြေရှာဖွေခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် စိစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ ပါ၀င်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့်အခါ၊ ၎င်းတစ်ခုတည်းသည် အချိန်ပြည့်အလုပ်ဖြစ်နိုင်သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ အတွေ့အကြုံ၊ REI Capital Growth ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းသုံးအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေဖြင့် သင့်အား အမှန်တကယ်အပျက်သဘောဆောင်သောအခွင့်အရေးကို ပေးဆောင်သည့် ဆုလာဘ်များကို မည်သို့မည်ပုံ စနစ်တကျထည့်သွင်းရမည်ကို သိရှိနားလည်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့က အစကနေ အဆုံးအထိ အလုပ်အားလုံးကို လုပ်ပါတယ်။ မင်းရဲ့တာဝန်လား? ထိပ်တန်း 1% ကဲ့သို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ပေါင်းစည်းပြီး မျိုးဆက်အလိုက် ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုကို တိုးပွားစေပါသည်။
ထိပ်ဆုံး ၁% သည်သူတို့၏ကြွယ်ဝမှုကိုစီးပွားဖြစ်အိမ်ရာများဖြင့်မျိုးဆက်သစ်များအထိတိုးပွားလာခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဆင့်၊ စီးပွားဖြစ်အိမ်ခြံမြေများဝယ်ယူရန်နှင့်ဤပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရေရှည်ထိန်းသိမ်းထားရန်သီးသန့်အခွင့်အရေးရှိသည်။
Stamford, မှန် CT 06905 ယူအက်စ်အေ
မည်သူမဆို ငွေကြေးရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု သို့မဟုတ် ယခင်အတွေ့အကြုံမရှိဘဲ နိုင်ငံတကာအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ ဖြစ်လာနိုင်သည်။ REI Fund အမျိုးအစားအသစ်ဖြင့် ယနေ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုက်ပါ။
တိုကင် Equity ယဇ်
© 2022 REI Capital Growth, LLC | မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။
"The Reinvented Funds®"နှင့်"Real Estate Investing Reinvented®" နှစ်ခုစလုံးသည် REI Capital Management LLC ၏မှတ်ပုံတင်ထားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်သည်။
REI Capital Management (REICM) သည်ကွန်ရက်စာမျက်နှာကို reicapitalgrowth.com (“ ဆိုက်”) တွင်အသုံးပြုသည်။ ဆိုက်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒကိုလက်ခံသည်။ မည်သည့်အရာ၏မည်သည့်တာဝန်ဝတ္တရားကိုမဆိုကတိကဝတ်များမ ၀ င်ပါ။ လုံခြုံရေး ၀ န်ဆောင်မှုကို ၀ ယ်ယူနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ကုမ္ပဏီနှင့်ညှိနှိုင်း။ ရောင်းဝယ်မှုဆိုင်ရာဖော်ပြချက်ကိုလက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ SEC ၏အရည်အချင်းပြည့်မှီသောမည်သည့်ကမ်းလှမ်းချက်မဆိုအရည်အချင်းပြည့်မီသောနေ့စွဲအပြီးတွင်လက်ခံမှုကိုအသိပေးခြင်းမပြုမီမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုတာဝန်ဝတ္တရားများ၊
အာမခံအားလုံးသည်စွန့်စားရမှုနှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသို့မဟုတ်စုစုပေါင်းဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် REICG နှင့် REICG တွဲဖက်များအားလုံးကိုရည်ညွှန်း။ အခွန်အကြံဥာဏ်သို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြံပြုချက်များကိုမပေးပါ။ ဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသောသို့မဟုတ်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုဤဆိုက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်ရလဒ်များကိုသေချာစွာမဖော်ပြထားပါ။ ထို့အပြင်မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်အခွန်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်စေမည်မဟုတ်ပါ။ အလားအလာရှိသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်သူတို့၏အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ အခွန်ဆိုင်ရာအကျိုးဆက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းတို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအခွန်အကြံပေးများနှင့်ဆွေးနွေးသင့်သည်။ REICM နှင့် ၄ င်း၏တွဲဖက်ကုမ္ပဏီများသည်မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမဆို REICM မှကမကထပြုသည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွင်ပါ ၀ င်သည့်အခွန်ဆိုင်ရာအကျိုးဆက်များသို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကျိုးဆက်များအတွက်တာ ၀ န်ရှိသည်ဟုမယူမှတ်ပါ။ ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိမက်ဆေ့ခ်ျများသည်ရောင်းရန်အဆိုပြုချက်တစ်ခုသို့မဟုတ်မည်သည့်လုံခြုံရေးအတွက်မဆိုစိတ်ဝင်စားမှုကိုတောင်းခံခြင်းမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏တရားဝင်ကမ်းလှမ်းမှုစာရွက်စာတမ်းများသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိကနေရာချထားမှုစာချွန်လွှာသို့မဟုတ်အလားအလာကဲ့သို့သောစာရွက်စာတမ်းများ မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်တောင်းခံခြင်းမပြုပါ။ ဤကမ်းလှမ်းချက်စာရွက်စာတမ်းများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ "INVEST NOW" crowdfunding portal မှတဆင့်သာရယူနိုင်သည်။